များစွာသောအပြစ်တို့နှင့်လွတ်သည်ဖြစ်၍အလွန်ချစ်တတ်၏ | Much Love from Pardoned Sinners | Real Conversion
“ထို့ကြောင့် ငါဆိုသည်ကား၊ သူသည်များစွာသောအပြစ်တို့နှင့်လွှတ်သည် ဖြစ်၍အလွန်ချစ်တတ်၏။ အနည်းငယ်သော အပြစ်လွတ်သောသူသည် အနည်းငယ်မျှသာ ချစ်တတ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (လုကာ ၇း၄၇)။
၎င်းသည် ရိုးရှင်းသောပုံပြင်ဖြစ်ပါသည်။ ရှိမုန်အမည်ရှိသော ဖါရိရှဲသည် ယေရှုအားညနေစာသုံး ဆောင်ရန်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ အစားအစာ၊ စားနေကြစဉ်တွင် အပြစ်ရှိသောအမျိုးသမီးသည် ငိုယိုလျှက်ရောက်ရှိလာပြီး၊ စီးကျသောမျက်ရည်ဖြင့် ယေရှု၏ခြေကိုဆေးကြောကာ၊ နံသာဆီမွှေးဖြင့် သုတ်လိမ်းပေးခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ပရောဖတ်တပါးဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်၊ ဤအမျိုးသမီးသည် အပြစ်ရှိကြောင်းကို၎င်း၊ အပြစ် သားဖြင့်လျှက် အဘယ်ကြောင့် သူ့အသားကိုထိဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သနည်းဟူ၍ တွေးတော့ခဲ့၏။ ယေရှုသည် ထိုဖါရိရှဲ၏ အတွေးကိုသိမြင်တော်မူသောကြောင့် ပုံဥပမာအသုံးပြုကာ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ယေရှုက၊ အကြွေးများစွာ၊ အကြွေးရှင်ထံတင်လျှက်ရှိ၏။ နောက်တဦး သည် အနည်းငယ်မျှသည် အကြွေးတင်သည်။ အကြွေးရှင်က ထိုသူနှစ်ဦး၏အကြွးရှိ သမျှကိုဖြေလွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ယေရှုက၊ အဘယ်သူသည် အကြွေးရှင်ကိုပို၍ ချစ်လိမ့်မလဲ ဟူ၍ မေးခဲ့သည်။ ဖါရိရှဲကလည်း “အကြွေးအများတင်သောသူကပို၍ချစ်မည်ဟု ပြော ကြားခဲ့သည်၊” ယေရှုကသင်မှန်ပေ၏ဟူ၍ပြောခဲ့သည်။ ယေရှုက၊ ဖါရိရှဲအားထုံးတမ်းစဉ် လာအတိုင်းခြေ ဆေးရန်သင်သည်မကျင့်သုံးဘဲ၊ ဤအမျိုးသမီးသည် မိမိဖျက်ရန်ဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ခြေကိုဆေးပေးခဲ့သည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည်ပို၍ကြီးမားသော အပြစ်ခွင့်လွှတ် ခြင်းကိုခံရသည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ အောက်ပါသမ္မာကျမ်းပိုဒ်ကို ဖေါ်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ထို့ကြောင့် ငါဆိုသည်ကား၊ သူသည်များစွာသောအပြစ်တို့နှင့် လွတ်သည် ဖြစ်၍အလွန်ချစ်တတ်၏။နည်းငယ်သောအပြစ်လွတ်သော သူသည်အနည်း ငယ်မျှသာချစ်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏” (လုကာ၇း၄၇)။
ဒေသနာတော်ကို မဟောကြားသေးခင်၊ အကျယ်ချဲ့ထွင်စရာအကြောင်းတစ်ခုကို ပြောကြားပါသည်။ စကားစု “သူသည်များစွာသောအပြစ်တို့နှင့်လွတ်သည်ဖြစ်၍ အလွန် ချစ်တတ်၏”ဟူသောစကားစုကို ချဲကားဖေါ်ပြပါမည်။ ဤအကြေားအရာကို မရှင်းပြ လျှက်၊ သူသည်ယေရှုကိုချစ်သောကြောင့်၊ သူ၏အပြစ်မှလွတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထင်စ ရာအကြောင်းရှိ၏။ ခရစ်တော်၏ လိုရင်းအဓိပ္ပါယ်မှန်မှချော်နိုင်သည်! ဆိုလိုသည်မှာ ယေရှု၏ခွင့်လွတ်မှုကိုရရှိသောကြောင့် မေတ္တာပွါးများခြင်းသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အပိုဒ်ငယ်၄၁-၄၃အထိကို ဖတ်ကြားမည်ဆိုလျှင်၊ ယေရှုကိုသူချစ်သောကြောင့် သူ၏ အပြစ်မှလွတ်ခြင်းခံရသည်ဟူသော ရှင်းလင်းချက်နှင့်ယေရှု၏ လိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ဆန့်ကျင် နေပါသည်။ ခေတ်သစ်အင်္ဂလိပ်စကားကို လေ့လာသောအခါ၊ ဒဒ်သမဓ သည် ဒဒအ့နမန်သမနဓ “ထို့ကြောင့်” “ထိုအတွက်ကြောင့်” ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်ဒေါက်တာ ဝီလျှံဟန်ဒရိစ် ဆန် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ဒဒ်သမ သည် ဝိဘတ်ဖြစ်၍” ဒဒျသ အ့နမန်သမနဒဒ ထို့အတွက်ကြောင့် ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်ဟု ပြောကြားပါသည်။ (The Gospel of Luke, Baker, 1981 edition, p. 412). ရိန်နက်ကားအနက်ပြန်ဆိုသည်မှာ၊ ထို့အတွက်ကြောင့်ဟူ၍ အနက်ပြန် ဆိုသည်မှာ၊ “ထို့အတွက်ကြောင့်”ဟူ၍ အနက်ပြန်ဆိုပါသည်။ (A Linguistic Key to the New Testament, Zondervan 1980, p. 160). ဒေါက်တာဂီးလ် ပြန်ဆိုပါသည်။ “ထိုအတွက်ကြောင် သူသည်အလွန်ချစ်တတ်၏”ဟူ၍ပြန်ဆိုသည်။ (An Exposition of the New Testament, Volume I, p. 575). မက်သရူးဟန်နရီပြောကြားရာ တွင်၊”သို့ဖြစ်၍ အလွန်ချစ်တတ်၏”ဟူသည် အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘဲ၊ အကျိုးရလဒ် သာဖြစ်သည် ဟုပြောဆိုသည်။ (Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible; note on Luke 7:47). ဒေါက်တာလန်းစကီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ “၎င်းအမျိုးသမီ၏ ချစ်တတ်ခြင်း က၊အကြောင်းတရားမဟုတ်ပါ၊ သူ၏အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို ခံရသောကြောင့် ထိုမေတ္တာကို ထောက်ထား၍ မျက်ဝါးထင်ထင်သက်သေပြသခြင်းသာဖြစ်၏” (The Interpretation of St, Luke's Gospel, Augsburg, 1961, p. 433). “သူသည်များစွာ သောအပြစ်မှလွတ်သည် ဖြစ်၍(ထို့ကြောင့်) သူသည် အလွန်ချစ်တတ်ခြင်း” ပင်ဖြစ်သည်ဟူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ဘာသာ ပြန်ဆိုရပါမည်။ ၁၅၉၉၊ ဂျင်နီဗာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ၊ “ခရစ်တော်ကို ချစ်ခြင်းဟူသည် အပြစ်မှလွှတ်ခြင်းရသော အကျိုးကျေးဇူး ကြောင့် မေတ္တာပွါးများရခြင်း ၏ သင်္ကေတလက္ခဏာတရပ်ဖြစ်သည်။ (note on Luke 7:47).
“ထို့ကြောင့် ငါဆိုသည်ကား၊ သူသည် များစွာသောအအပြစ်တို့နှင့်လွှတ်သည် ဖြစ်၍အလွန်ချစ်တတ်၏။ အနည်းငယ်သောအပြစ်လွတ်သောသူသည် အနည်း မျှသာချစ်တတ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (လုကာ၇း၄၇)။
ဤအကြောင်းအရာသည် အလွန်အရေးကြီးလှပါသည်။ ခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ် ချစ်ခြင်းဟူသည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမှစီးဆင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်း အတွေ့အကြုံမရှိသေးပါလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်တော်ကို ချစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤအ ကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သက်၍ အချက်နှစ်ချက်ရှင်းပြစရာရှိပါသည်။
၁။ ပထမ၊ ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲ့သောယနေ့ခေတ်တွင် ယေရှုကိုအနည်းငယ်မျှ သာချစ်ကြ သည်။
နောက်ဆုံးသော ပရောဖက်ကာလတွင်၊ ယေရှုပြောကြားသည်မှာ၊
“မတရားသောအမှုတို့သည် များပြားသဖြင့် အများသောသူတို့၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။” (မဿဲ ၂၄း၁၂)။
ယနေ့ခေတ်သည် မကောင်းဆိုးဝါးမှုများပြားသောကြောင့်၊ မေတ္တာခေါင်းပါးနေပါသည်။ မက်သရူးဟင်နရီပြောကြားသည်မှာ၊ “မတရားမှုထဲပါသွားသောအခါ၊ မကောင်းမှုဆက် လုပ်ရန်သွေးဆောင်နေမည်၊ ထိုအခါကျေးဇူးတော်သည် (မေတ္တာ)လည်းအေးစက်လို့လာ ပါမည်။ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တို့သည်လည်းရှက်ခြင်းမရှိ၊ စိမ်းကားလာမည်၊ မေတ္တာ သည်ပျောက်ပြယ်သွားပါမည်၊ ငရဲသည်ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်နေသည်၊ သူတော်စင် များကို ဖျက်ဆီးနေမည်၊ ဤသည်ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းကာလ၊ မေတ္တာခေါင်းပါးခြင်းနေ့ ရက်ကာလရောက်ရှိလို့လာသည်ကိုပြသသည်။”
ထို့နေ့ရက်ကာလအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့အသက်မရှင်ရကြဘူးဟူ၍ မည်သည်ငြင်းဆိုမည် နည်း? ရှင်မဿဲ၂၄း၁၂သည် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၊ အသက်ရှင်သောနေ့ရက်ကာလဆိုးအတွက် ပရောဖက်ပြုထားသည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသဖြင့် ယနေ့ခေတ်ကာလကို ပြောခြင်းမဟုတ်ဟု မည်သူပြောနိူင် မည်နည်း?
“မတရားသောအမှုတို့သည် များပြားသဖြင့် အများသောသူတို့၏၊ ချစ်ခြင်း မေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်။” (မဿဲ၂၄း၁၂)။
ကျွန်ုပ်လူငယ်ဘ၀၌ ထက်ခြမ်းကွဲသော ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏ အသင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအသင်းတော်၏ အသင်းသားများတဦးနှင့်တဦး မတရားစွပ်စွဲကာအပြစ်ဖို့ တိုက်နိုက်ပြောဆိုကြသည်။ “ခရစ်ယာန်များသည် မှန်ကန်သော သူများ” မဟုတ်ကြဘူးဟူ၍ တွေးခဲ့သည်ဖူးသည်ကို အမှတ်ရမိသည်” ကျွန်ုပ်ကယ်တင် ခြင်းရရှိပြီးနောက်တွင်၊ ထိုသူတို့သည် အသက်တာမပြောင်းလဲကြသောသူ၊ ခရစ်ယာန်မ ဟုတ်သည်ကိုနားလည်ရပါသည်။ မေတ္တာခေါင်းပါးရခြင်းသည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီး အသက်တာမပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ “အနည်းငယ်သာအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရ လျှင်၊ အနည်းငယ်သာချစ်တတ်သည်” အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းမခံရသေးသောသူတို့သည် စိတ်ဆိုးမာန်တတ်လျှက်ခါးသီးရင့်စွာ အသင်းတော်မှထွက်ခွါသွားမည်ဖြစ်သည်။
(၁၆၇၄-၁၇၄၈ ဣဇက်ဝပ်သီကုံးသော “အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက်စဉ်”ဓမ္မသီချင်း)
ယနေ့ “အပေါ်ယံဆန်ခရစ်ယာန်ဝါဒီ”တို့သည် မှားယွင်းမှု၏ အခြေခံအစဖြစ်လာ သည်။ ဖန်နီးနှင့်နောက်လိုက်တို့ကြောင့် သန်းပေါင်းချီသော မယုံကြည်သူများအား အသင်းတော်၌ အသင်းသားများအဖြစ်ရှိနေကြရသည်။ အသင်းသား^သူဖြစ်လာဖို့မေး မြန်းစစ်ဆေးခြင်းမ ရှိတောဘဲ့၊ လက်မြောက်သဘောတူလက်ခံခြင်းဖြင့် “ရှေ့ဆက်၍” “အပြစ်သားတို့၏ ဆုတောင်းသံသည်ပမာ” ဆုတောင်းကာဖြင့် အသင်းသားအဖြစ် လက္ခံကြရတော့သည်။ ထိုသူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာတော်နှင့်အညီ မိမိတို့၏အပြစ် အတွက် နောင်တရခြင်းမရှိ၊ ယေရှုသခင်ကို အနည်းငယ်မျှသာချစ်ပြီး အသင်းတော်၏ အသင်းသားအဖြစ်မယုံကြည် သူများကို အသင်းသားအဖြစ်လက္ခံကြရတော့၏။ ဤကဲ့သို့ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များ အဖို့ရှုပ်ထွေးစရာ၊ ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ရသည်။
“မတရားသောအမှုတို့သည် များပြားသဖြင့်အများသော သူတို့၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်” (မဿဲ၂၄း၁၂)။
ထို့သို့သော ခရစ်ယာန်များကို ရှင်ပေါလုကကြိုတင်၍ ဗျာဒိတ်ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားကိုပို၍ ချစ်မည့်အစား “ကိုယ်ကိုကိုယ်ချစ်သောသူ” (၂တိ၃း၂)ဟူ၍ ဗျာဒိတ်ပေးခဲ့၏။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် “အပေါ်ယံဆန်ဝါဒီ”တို့၏ လမ်းညွှန်းမှုအောက် သို့ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။
လမ်းလွဲစေသောသူတို့ကြောင့် အပြစ်သည် အသင်းတော်ထဲ၌ပေါင်းစပ်လာပြီဖြစ်၍၊ စစ်မှန်သော အသက်တာပြောင်းလဲသူတို့အနေဖြင့် ခရစ်တော်နှင့်ပို၍နီးကပ်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ မိမိတို့၏အပြစ်ငရဲမှခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိသောကြောင့်ပို၍ ယေရှုကိုချစ်တတ်ရမည်ဖြစ် သည်။
ကိုယ်တော်ကိုသာချစ်ပါ၏။ ၁၈၁၈မှ၁၈၇၈ ဧလိဇဘတ်ပရန်သီးစ် သီကုံး
“ထို့ကြောင့် ငါဆိုသည်ကား၊ သူသည်များစွာ သောအပြစ်တို့ နှင့်လွှတ် သည်ဖြစ်၍ အလွန်ချစ်တတ်၏။ အနည်းငယ်သောအပြစ် လွတ်သော သူသည်အနည်းငယ်မျှသာချစ်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏” (လုကာ ၇း၄၇)။
၂။ ဒုတိယ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းခံရသောအခါ၊ ယေရှုကိုချစ်တတ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့အား ရေ့Tလျားစေပါသည်။
အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်၌ပါသော အမျိုးသမီးသည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို နက်နဲစွာသိမြင် ခံစားခဲ့ရသည်။ နုတ်ကပတ်တော်မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“ထိုမြို့၌ဆိုးသောမိန်းမတဦးသည်...ငိုကြွေး၍ခြေတော်ပေါ်သို့ မျက်ရည်ကျ လျှင်” (လုကာ၇း၃၇-၃၈)။
မိမိတို့အသက်တာအသစ်တဖန် မွေးဖွါးလာဖို့ ဤအကြောင်းအရာသည် ခရစ်ယာန်တို့ အမှတ်ရသင့်သောအချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်၌စစ်မှန်သော ပြောင်းလဲခြင်း အတွေ့အကြုံရှိခဲ့မည်ဆိုလျှင်၊ သင့်အပြစ်နှင့်ပါတ်သက်၍ စိတ်မသက် မသာစရာရှိသမျှ အားလုံးအတွက် ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိပြီးကြောင်း သံသယပွါးစရာမလိုတော့ ပေ။ သင့်အပြစ်ငရဲမှ ယေရှုသင့်အား ကယ်တင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သင်သည်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ရရှိပြီကြောင်း သံသယရှင်းရပါမည်။ သင့်အပြစ်ကြောင့် ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲ့မှုရှိသမျှအထဲက သင့်အားအံဩဖွယ် ယေရှုကယ်တင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သတိရနေရမည်ဖြစ်မည်! သင့် အသက်တာအေးစက်မှေး မှိန်နေချိန်တွင်၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ တပါးသူတို့အား ဧဝံဂေလိဝေငှါခြင်းဖြင့် နွေးထွေးလာပါလိမ့်မည်၊ သင့်အပြစ်ငရဲမှ သင့်မျှော်လင့်ရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း သတိရနေရမည်! ယေရှု၏မေတ္တာဂရုဏာတော်ကို အမြဲသ တိရပြီး သူ့အားပို၍ချစ်တတ်ရပါမည်၊ ထို့အခါ သင်သည်အောက်ပါအတိုင်း သီဆိုနိုင် မည်၊
ပေါလ်ခုပ်စ်ရေးသားသော “ကောင်းကင်မှမီး”ဟူသော စာအုပ်ကို ကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ပါ သည်။ (နလညေါနူငခal ဏမနျယ ၂၀၀၉). စစ်မှန်သောအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းဟူသည် မိမိ ၏အပြစ်အကြောင်းကို မှန်ကန်စွာသိနားလည်ရမည်ဟု သိက္ခာတော်ရခုပ်စ်က ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ “လူသည် မိမိကိုကိုအကောင်းမြင်သည် ဘယ်တောအခါမှ မိမိတို့၏အပြစ်ကို နောင်တသံဝေဂမရရှိကြချေ၊ ဝိညာဉ်တော်၏ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းခံရဖို့လိုပါသည်။ ဝိညာဉ် တော်ကဦးဆောင်လာသောအခါ၊ လူသည်မိမိကိုကိုမုန်းတီးလာပြီး မိမိတို့၏ဇာတိပကတိ ကိုစွန့်ပယ်လာမည်ဖြစ်သည်၊ ကနေ့တရားဟောဆရာအများတို့သည်လည်း “အပြစ်နှင့် နောင်တတရားကို မဟောကြားကြတော့ပေ”ဟုခုပ်စ်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယေရှုခရစ်နာမ တော်အားဖြင့် ငိုယိုပြီးဘုရားသခင်ထံတော်ပါးက ဂရုဏာတော်ကို တောင်းလျှောက်ဖို့၊ လိုအပ်ပါသည်ဟူ၍လည်း ပြောကြားခဲ့ပါသေးသည်။ “ကျွန်ုတော်များ အသင်းတော်တို့ သည် ထိုကဲ့သို့သော အချက်အလက်များကို မေ့မေ့လျှော့လျှော့မေ့နေကြပါသည် ဟူ၍ လည်းပြောခဲ့ပါသည်။ လူတွေဟာတစုံတခုပြုလုပ်ဖို့ ခရစ်တော်သခင်ထံဆက် ကပ်အပ်နှံ ထားကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးက ဂရုဏာတော်ကို တောင်း လျှောက်ဖို့၊ခဲ့ယဉ်းကြပါသည်ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးက သနားခြင်းဂရုဏာတော်ကို တောင်းလျှောက်ခြင်းဟူသည် နောင်တသံဝေဂရရှိခြင်းလည်း မည်၏” (ibid). အခွန်ခံမူကား “အဝေးကရပ်၍ ကောင်းကင်သို့မမျှော်မကြည့်ဝံ့ဘဲ၊ ရင်ဘတ်ကိုခတ်လျှက်၊ အိုဘုရားသခင်၊ အပြစ်များသော ကျွန်ုပ်ကိုသနားသော ဂရုဏာ စိတ်ရှိတော်မူပါဟု ဆုတောင်းလေ၏” (လုကာ၁၈း၁၃)။ သိက္ခာတော်ရခုပ်စ်ပြောကြားခဲ့ သည်မှာ၊
လူတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်ကိုမသိနားမလည်ဘဲ၊ အပြစ်အကျိူးအပြစ်ကို လည်း နားမလည်းသောသူတစ်ယောက်သည် တနေ့သောအခါဘုရားသခင် အကြောင်းကို သိနားလည်သိရှိခဲ့ပါသည်။ အပြစ်ကိုနက်နက်နဲနဲနားလည်း လာပြီး ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေလာပါသည် ဘာမှမသိနားမလည်ခြင်းမှ စစ်မှန်သောဘုရားကို ရှာဖွေလာပါသည်။ ထိုသူသည် မိမိ၏အပြစ်အတွက် စစ်မှန်သော နောင်တတရားနှင့် အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းရသည့်တိုင်အောင် ဘုရားသခင်ကို ရှာဖွေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သူသည်ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချ မှုနှင့်ဘုရားသခင်ထံတော်ပါက ဂရုဏာတော်နှင့် အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ ပါသည်။ ပြီးနောက် ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းအသက်တာကို ဆက် လက်ခံစားရလာပါသည် (ibid., page 119).
“ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးက ဂရုဏာတော်တောင်းလျှာက်ခြင်း” သည် စစ်မှန်သောပြောင်းလဲ့သူတို့ အသက်တာ၌ တွေးမြင်ရပါသည်။
(၁၈၀၀-၁၈၃၀ဒုတိယအကြိမ်နိုးကြားရေးကာလက အဖြစ်အပျက်အတွေ့အကြုံကို သိက္ခာတော်ရခုပ်စ်က ဖေါ်ပြရေးသားထားပါသည်။ ဝီလျှံကာဘောဆော၏ အသက်တာ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုသူကပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ကျွန်ုပ်သည်အပြစ်၏ နက်နဲ့ သောအကျိုးအပြစ်ကို သိရသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သူဖြစ် သည်၊ မြေကြီး၏ပါးစပ်သည်ဟပြီး ကျွန်ုပ်ကို မျိုချဖို့ရန်သာရှိတော့၏” နောက်ဆုံးသော ဝိညာဉ်စစ်ပွဲတွင် ခရစ်တော်သည် ပေါ်လာပြီး၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်၏အပြစ်ရှိ သမျှကို ခွင့်လွတ်တော်မူ၍ လွတ်လပ်သောသူ အဖြစ်ချမ်းသာပေးခဲ့သည် ထိုအချိန်သည် ၁၇၇၁၊မေလ၊ ၁၇ရက်ည၊ ၉နာရီအချိန်၌ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်နာရီကို ဘယ်တော့မှ ကျွန်ုပ်မမေ့ပါ” (ibid., pp. 74, 75). ဒုတိယအကြိမ်နိုးကြားရေးကာလတွင်၊ ဘုရားသခင် သည် မစ္စတာကာဘောဆောကို အသုံးပြုခဲ့ ပါသည်။
ရက်ချက်သရူးဝါဗာ့စ်သည် လေမုန်တိုင်းကျရောက်သောကြောင့် သင်္ဘောကုန်း ပတ်မှပြေးလွှားရ၏၊ သူ့အပြစ်ကြောင့် ငိုကြွေးခဲ့၏။ “ကယ်တင်ရှင်သခင်ကို မှီတွယ်ခြင်း မရှိလျှင်၊ ထာ၀ရပျက်စီးခြင်းထဲကျရောက်တော့မည်၊ အသက်ရှင်ခြင်း ငှါခရစ်တော်သခင် ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင်သည်” ဟူသည်ကို သိလာခဲ့သည်။ ခြောက်လကျော် ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲပြီးသောအခါ၊ သူသည်ခရစ်တော်၌ထာ၀ရငြိမ်ချမ်းခြင်းကိုရရှိခဲ့သည်။ (ibid.)
ရှောလမုန်ဘူရယ်လ်သည် တက်ကီမီးလ်မိုင်းတွင်းထဲပိတ်မိ၍ ဝိညာဉ်ရေးရာ မွမ်းကြပ် ၍ဟိုဒီပြေးလွှားပြီး ကယ်ဆယ်ရေး အကူအညီရသည့်အထိ ဘုရားသခင်ကို ငိုယိုအော်ဟစ် ခဲ့သည်။ (ibid.).
ဝီလျှံကာဗိုဆော့စောနက ကျွန်ုပ်ပြောကြားခဲ့သော သူသည်ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီး နောက်ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးတစ်နေရာ၌ ထိုသူက၊
ရာချီသော သူတို့သည်သနားခြင်း ဂရုဏာတော်အတွက်ငိုယိုဆုတောင်းခဲ့ကြ၏ အချို့သောသူတို့ကား၊ ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်၊ တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီ၊ တချို့တို့က ခြောက်နာရီ၊ အချို့ဆိုရင် ကိုးနာရီ၊ ဆယ်နှစ်နာရီနှင့်တစ်ဆယ် ငါ့နာရီအထိ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်ဝယ် ဆုတောင်းအော်ဟစ်ကြ၏-ထို့နောက်ထိုသူ တို့သည် လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး ဘုရားသခင်၏ အံ့ဩဖွယ်သတင်း ကောင်းကို ကြွေးကြော်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ စွမ်းအားဖြင့် ဟောကြားသောအခါ လူထုပရိသတ်များလည်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ၊ မိမိတို့၏အသက်ဝိညာဉ်(ဆင်း ရဲဒုက္ခ)မှ လွတ်မြောက်၍ နှစ်ထောင်းအားရကြပေသည်။ (ibid., p. 80).
သိက္ခာတော်ရ ခုပ်စ်ပြောကြားသည်မှာ၊ “ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အံ့ဩစရာမဖြစ်စေ ပါ၊ အထိတ်တလန့်လည်းမဖြစ်စေသင့်ပါ၊ ထိုသို့ဖြစ်ပျက်လာခြင်းဆိုရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၌ မကြာခဏတွေ့ကြုံရသော အဖြစ်အပျက်မဟုတ်ပါ” (ibid., p. 83). ဝီလျှံကာဆောဘော ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ညီအကိုစမက်စ်သည် သူစိမ်းဧည့်သည် တစ်ယောက်ဖို့ကျွန်တော်နှင့်တနေ့ သောညနေခင်းတွင်၊ အတူတကွဆုတောင်းခန်းထဲမဝင်သေးခင်၊ လ္ဖက်ရည် သောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ကျွုန်တော်သည်နုတ်ကိုဖွင့်၍ဆု တောင်းခဲ့၏။ ထိုသူသည် ဝိညာဉ်တော်တို့ထိသောကြောင့် သူ့ဝိညာဉ် (ဆင်းရဲခြင်း)အတွက် နိုးကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုသူကဲ့သို့ ဝိညာဉ်ရေးအတွက် ပြင်းထန်သောသူကို ဘယ်တော့အခါမှ မတွေ့ဖူးခဲ့ပါ၊ မကြာမှီတွင်ဝိညာဉ် မွန်းကြပ်ခြင်းမှလွန်မြောက်ကား၊ သနားခြင်းဂရုဏာတော်နှင့်ဝမ်းမြောက် ခြင်း၊(ခရစ်တော်)အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးကို ခံစားခဲ့ပါသည် (ibid., p. 85)
တချို့သောသူတို့၏ ဝိညာဉ်ရေးရာမွန်းကြပ်ခြင်းမှ လွန်မြောက်ဖို့၊ နေ့ညပေါင်း များစွာဆုတောင်းငိုယိုကာ၊ ဘုရားသခင်အထံတော်ကသနားခြင်း ဂရုဏတော် ကိုတောင်းလျှောက်သံဝတ်ပြုကျောင်းထဲက ကျွန်ုပ်ကြားနေပါသည်။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်သည် အပြစ်ကိုဖေါ်ပြ၍ အံ့ဩဖွယ်အမှုပြုသောကြောင့် ထိုသူတို့သည် ဒူးထောက်ဆုတောင်းခဲ့ကြ၏။ ထိုသူတို့သည်အမှန်တကယ်ပင်၊ ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်ရှင်ခြင်း၌ ရှုပ်ထွေးခြင်းများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည်။ဘုရား သခင်သည် ထိုသူတို့အားသနားခြင်း ဂရုဏာတော်ကိုပြသခဲ့၏။ ထာ၀ရအ သက်ကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အာမင်၊ အာမင်။ (ibid., pp. 87, 88).
အမျိုးသမီးတဦးလည်း အသက်တာမပြောင်းလဲဘဲ၊ ဘုရားကျောင်းကို ပုံမှန်တက်ရောက်ခဲ့သည်မှာ အနှစ်၃၀ပြည့်ပါပြီ၊ ဘာသဝင်တဦးသာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်သားတော်ကို လက်ခံခြင်းမရှိဘဲ၊ အန္တရယ်ကျရောက်ဖွယ်အနေအထား၌ ပင်ရှိနေသည်။ အသစ်တဖန်မွေးဖွးခြင်းမရှိဘဲကောင်းကင်ဘုံဝင်စားဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေ၊ နှလုံး သားထဲဆူးရှခံစားလာမိသည်၊ ဒူးထောက်၍ မိမိ၏အပြစ်ဒုစရိုက်အတွက် ဝမ်းနည်းပူဆွေး လျှက်၊ ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးသနားခြင်း ဂရုဏာတော်ကို တောင်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ “ဘုရားသခင်အပြစ်ငရဲထဲမှ ကယ်နုတ်တော်မူပါ” ဟူ၍ ငိုယိုဆုတောင်းခဲ့၏။ ကြေကွဲစွာ ဖြင့်အော်၍ ဆုတောင်းခဲ့သောကြောင့် သူ့ထံသို့ကြွရောက်လာပြီး၊ “အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းခံစားခဲ့ရသဖြင့် ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကို ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။” ထိုသို့သောဆုကျေးဇူးအတွက် ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ သက်သေထူခဲ့သည်။ ထာ၀ရဘုရား သခင်၏ဝိညာဉ်တော်၏ အမှုတော်သည် အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၍ ငိုယိုဆုတောင်းသောသူတို့ အပေါ်သို့ ဂရုဏာတော် သက်ရောက်သဖြင့် မိမိတို့အိမ်၌ ဆုတောင်းနေသော်လည်း လမ်းမထွက်သွားလာ သူများ ပင်လျှင်ကြားရကြ၏ (ibid., p. 90).
ဝီလျံကာဘောဆောက လူတဦး၏ပြောင်းလဲခြင်းကို ဤကဲ့သို့ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ထိုသူထံသို့ အလည်သွားရောက်ဖို့ ကျွန်ုပ်အားဖိတ်ကြားခြင်း၊ သူ၏ဆုတောင်း သံကိုကြားနေသည်၊ ထိုသူနှင့်ကြာကြာ(စကား)မပြောဖြစ်ပါ၊ ဌိုသူသည် ဝိညာဉ်တို့ထိမှုကြောင့် နိုးကြးလာပြီးသနားခြင်း ဂရုဏာတော်အတွက်ငိုယို ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ထိုသူနှင့်အတူဆုတောင်းပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပြန်ထွက် လာခဲ့သည်၊ ညနေခင်းအချိန်တွင် သူ့အားခေါ်ပြီးလျှက်၊ တလောကလုံး၏ အပြစ်ကို ယူဆောင်သွားခဲ့သောဘုရားဟူ၍ လတ်ညိုးထိုးပြပြီး၊ ဘုရားသခင် သည် သူအားသနားခြင်း ဂရုဏာတော်ကို ပြသသဖြင့် ထိုသူက “ကျွန်ုfပ်၏ ဝန်ပိုးဖြေလျှော့သွားပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏အပြစ်အားလုံးကို ခွင့်လွှတ်ပါပြီးနာမတော် kန်းကြီးပါစေသော်”!ဟူ၍ ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ မကြာခဏသူ့ထံသို့ ကျွန်ုပ် သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်၊ သူသည်မတုန်မလှုပ်ခိုင်မြဲသော ယုံကြည်သူ ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်၊ (ibid., p. 90).
သိက္ခာတော်ရ၊ ခုပ်စ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ သူတို့သည်လူတို့အား “အပေါ်ယံသမား ခရစ်ယာန်” တို့ထံပို့ဆောင်နေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သူပြောကြားသည်မှာ၊ “သူတို့သည် ဧဝံဂေ လိသတင်းကောင်းကို အင်တိုက်အားတိုက်ဟောကြားခဲ့သည်၊ မောမောပန်းပန်းတပါး သူတို့ကို ဘုရားသခင်လက်တော်အရောက်ကြိုးစား၍ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်” ကယ်တင်ခြင်း ဟူသည် အပြစ်သားတို့အနေဖြင့် ခရစ်တော်ထံဦးစွာ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ခရစ် တော်သည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဘုန်းတန်ဦးဖြင့် အပြစ်သားတို့ထံဦးစွာလာရောက် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်ကို ထိုသူတို့နားလည်ကြပါသည်။ ခရစ်တော်သည် လူသားတို့ ၏ “ဆုံးဖြတ်ချက်”အရ ဤလောကသို့ ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု မယုံကြည်ကြပေ၊ “ထိုအ တွက်ကြောင့် ထိုသူတို့သည် မိမိတို့၏အပြစ်ကို နောင်တသံဝေဂေရရှိကြပြီး ဘုရားသခင် ထံတော်က သနားခြင်းဂရုဏာတော်ကို တောင်းလျှောက်ဖို့ တွန်းအားပေးကြ၏၊ အပြစ် ခွင့်လွှတ်ပြီး ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်လာသည်အထိ အော်ဟစ်ဆုတောင်းခဲ့ကြသည်။ ထိုသူတို့က အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထုတစ်ခုလုံးအား ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံ ကြည်လက္ခံကြဖို့ ဟောကြားကြပါသည်။ ထိုထက်ပို၍ ဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေပြီး သနားခြင်းဂရုဏာတော်ခံစားရသည့်တိုင်အောင် ဆုတောင်းရန်တွန်းကားပေးကြပါသည်။ မှန်ကန်စွာ မိမိတို့၏အပြစ်သဘာ၀ကို နားလည်ပြီး၊ စစ်မှန်သောနောင်တသဲဝေဂရရှိလျှက် ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ ဘုရာသခင်အထံတော်က သနားခြင်းဂရုဏာတော်တောင်းလျှောက် သံ၊ဘုရားသခင်တူးတော်မူသည့်တိုင် ငိုယိုဆုတောင်းဖို့ တွန်းအားပေးကြသည်။ (သူတို့) ဘုရားသခင်၏သနားခြင်းဂရုဏာတော်ကို အရယူဖို့မဟုတ်ဘဲ၊ သနားခြင်းဂရုဏာတော်ကို ရှာဖွေရန်သာဖြစ်သဖြင့်၊ ဘုရားသခင်သည် သနားခြင်းဂရုဏာတော်ကို ရှာဖွေသောသူတို့ အားကျေးဇူးပြုတော်မူသော ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ ဘုရားသခင်သည်ထိုသူတို့ ၏နှလုံးသားထဲ၌ ငြိမ်သက်ခြင်းကို သွန်းလောင်းတော်မူမည်ဖြစ်သည်။ လူသည်ဘုရားသ ခင်အပေါ် မှီခိုခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ကို သိမြင်ရပါမည်၊ ထိုသူတို့သည်မှန် သောကျမ်းစာအပေါ် အလေးထားသူများထက် နလညေါနူငခal အသင်းတော်တည်ထောင့် နေကြသည်ကို ယနေ့တွေမြင်ရပါသည်။ ထိုသူတို့ ယုံကြည်သည်မှာ ဘုရားသခင်အလုပ် မလုပ်ပါက ထိုသူတို့ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်နိုင်ကြပေဟူ၍ ယုံကြည်လက္ခံကြပါသည်။ ထိုသူတို့၏ ရှင်းလင်းချက်သည် ထိုသူတို့ကိုယ်တိုင်များစွာ အချိန်ယူဆုတောင်းပြီးစိတ် အားထက်သန်စွာအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပြောပြခြင်းဖြစ်၏” (ibid., pp. 104, 105) / ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ထို့ကြောင့် ငါဆိုသည်ကား၊ သူသည်များစွာသောအပြစ်တို့နှင့်လွတ်သည်ဖြစ် ၍ အလွန်ချစ်တတ်၏ အနည်းသောအပြစ်လွတ်သောသူသည် အနည်းငယ်မျှ သာချစ်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ထိုမိန်းမအားလည်း သင်သည်အပြစ်တို့ နှင့်လွတ်လေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏” (လုကာ ၇း၄၇-၄၈)။
ခံယူချက်အယူအဆနှင့် ကျမ်းပိုဒ်များကိုသာ ယုံကြည်ခြင်းဟူသည် ကောင်းမြတ် သည်မဟုတ်ပေ၊ ဤကဲ့သို့အားဖြင့် သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းမရရှိပေ။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အားနိုးကြားစေပါမည်။ သင်အပြစ်အကျိုးအပြစ်ကြောင့် သင့်ကိုဒုက္ခရောက်စေမူမည်။ သင့်အပြစ်အကျိုးကြောင့် သင့်ကိုဒုက္ခရောက်စေမူမည်။ သင်သည်အန္တရာယ်ကြားထဲ ကျရောက်နေပြီး၊ တရားစီရင်ခြင်းခံရမည်ကို သင့်အားဖေါ်ပြနေပါမည်၊ သင့်အပြစ်နှင့် လွတ်ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်သည် သင့်အားယေရှုထံပို့ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ဤအရာ များတို့သည် သင့်တန်ခိုးအားဖြင့် ဖြစ်လာခြင်းမဟုတ်ပေ၊ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာ သည် အခွန်ခံပမာ ရင်ဘတ်ကိုလက်နှင့်ခတ်လျှက် ငိုယိုကာဆုတောင်းအသနားခံဖို့ရန်သာ ဖြစ်သည်။ “အပြစ်များသောအကျွန်ုပ်ကို သနားခြင်းစိတ်ရှိတော်မူပါဟု ဆုတောင်းလေ၏” (လုကာ၁၈း၃၃) “ကျွန်ုပ်အားသနားတော်မူပါ”ဟူသော သင်တို့၏ဓမ္မသီချင်းစာအုပ်နံပါတ် (၇)ကိုမတ်တပ်ရပ်လျှက်သီဆိုကြပါစို့၊ မူလနှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏ ဓမ္မသီချင်း “ခွင့်လွှတ် တော်မူပြီ”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုသည်။
ဓမ္မသီချင်းကို သင်းအုပ်ဆရာမှ ပြင်ဆင်၍ “ညဦးယံ” ဟူသောသံစဉ်
-တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတ်တန်အာရ်ချန်မှ ရှင်လုကာ၇း၃၆-၃၇ကို ဖတ်ကြားပေးသည်။
-တရားဒေသနာတော် မတိုင်ခင်မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ် ဂရိဖက်စ်မှကိုယ်တော်ကို ပို၍ ချစ်ပါ၏” (၁၈၁၈-၁၈၇၈ ခုနှစ်ဧလိဇဘက်ပီ.ဖရန့်တက်စ် ရေးသားသီကုံးသည်။
၁။ ပထမ၊ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲ့သောယနေ့ခေတ်တွင် ယေရှုကိုအနည်းငယ်မျှ သာချစ်ကြ သည်။ ရှင်မဿဲ၂၄း၁၂၊ ၂တိမော၃း၂
၂။ ဒုတိယ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းခံရသောအခါ၊ ယေရှုကိုချစ်တတ်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့အား ရေ့Tလျားစေပါသည်။ လုကာ၇း၃၇၊ ၃၈၊ ၁၈း၁၃၊ ၇း၄၇-၄၈